Xildh. Warfaa oo sheegay in xukuumaddu aysan doonayn in ergooyin dambe ay wakiillada shacabka soo xulaan – Kalfadhi
August 11, 2019 August 11, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada DFS ahna Xildhibaan ka tirsan golaha shacabka mudane Sadiiq Warfaa ayaa maanta dadweynaha kula ciidaya degmada laga soo doorto ee Galdogob oo ku taal Galbeedka gobolka Mudug.
Maamulka gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ayaa si wadajir ah u soo dhoweeyay Xildhibaanka, goor dambe oo sabtidii ah. Munaasabadda soo dhowaynta wuxuu kaga hadlay ahmiyadda nabadgelyada Gaalkacyo iyo doorashooyinka dhow ee dalka.
“Ma nasan doono, mana seexan doono, waa in aanu ka shaqaynaa in muwaadiinka Soomaaliyeed oo meel walba jooga uu isagu xaq u leeyahay qofka isaga metelaya inuu soo doorto” ayuu yiri Xildh. Warfaa
Wuxuu xusay xeerka ay xukuumaddu gudbisay ee doorashooyinku inuu horyaal golaha shacabka. Wuxuu sheegay in xukuumadda ay ka go’an tahay in mar dambe ergooyin iyo inyar oo bulshada ka mid ahi aysan dad soo xulan.
Hadalka Xildhibaankan xukuumadda ka tirsani wuxuu soo baxayaa xili qaar ka mid ah golaha shacabka ay walaac ka muujinayaan geedi-socodka xukuumaddu u diyaarinayso in lagu gaaro doorashooyinka 2021.
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi ayaa hore u sheegay in xeerkii xukuumaddu soo gudbisay ahaa mid aan laga fiirsan oo la boobsiiyay, sidaasna uu golaha shacabku ugu saaray guddi xildhibaano ah oo si wanaagsan uga soo shaqeeya xeerka si kalfadhiga lixaad looga doodo.
Ugu dambayntii, Xildhibaan Warfaa wuxuu xalay xafiiskiisa arrimaha dadweynaha ee uu hore uga furay Galdogob kula afuray odoyaasha iyo waxgaradka deegaanka.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay in maanta oo kale shacabku is-caawiyaan